Status Peji Sistimu: chii icho, uye chii chiri nani | Linux Addicts
Kuti agadzirise matambudziko angave nehurongwa, maneja anofanira kuziva kuti chii chinokonzera. Uye nekuda kweizvi zvinodikanwa kutarisa imwe data yakakodzera inogona kuratidza zviri kuitika. Zvekuti iwe uve nazvo zvese nechepakati uye zvaunazvo, unogona kushandisa software senge mamiriro peji peji kana mapeji emamiriro.
Kana iwe uchinetseka kuti chimiro chepeji peji chii, taura izvo zvishandiso izvi zvakakosha kumasevhisi epamhepo, inopa indexes uye downtime, iyo yekuona nayo matambudziko, kuvandudza kuvimba kwevashandisi, uye kuchengetedza nguva mukutarisira. Mukuwedzera, kune akawanda mapurojekiti akasununguka zvachose uye akavhurika sosi.
1 Sarudzo dzechimiro peji system
2 Chii chekutsvaga kana uchisarudza peji peji?
3 Wepamusoro gumi nemaviri
Sarudzo dzechimiro peji system
Paunenge uchigadzira peji remamiriro ewebhusaiti yako kana sevhisi, unogona kusarudza sarudzo mbiri:
Sevhisi yakabhadharwa senge Instatus kuita otomatiki basa rese rakaoma. Rega mupi webasa akugadzirire, tambira uye nekukuchengetera peji rino.
Shandisa yemahara uye yakavhurika sosi system kuti uzvigadzire yako mamiriro peji. Mune ino kesi, iwe uchafanirwa kuigamuchira iwe pachako uye kutarisira manejimendi ayo.
Nekudaro, kunyangwe iyo yechipiri sarudzo ingaite seyakaoma, inogona kunge iine zvimwe zvinobatsira:
Yemahara, pasina chero mari.
Kuve yakavhurika sosi inoshanduka zvakanyanya.
Iwe unogona kuzvigamuchira iwe pachako, chimwe chinhu chingaite sechisina kunaka, asi chinokutendera kuti usarudze chikuva chekutambira.
Unlimited nhengo dzechikwata uye vanyoreri, sezvaunodzora izvi. Mune vakabhadharwa pangave nemiganhu.
Kune mamwe makambani, pamwe mapeji akaita seInstatus zvinogona kuva nezvakanakira:
Nyore uye nyaradzo.
Helpdesk kana chimwe chinhu chakaipa.
Pekugara uye kugadzirisa.
Kubatanidzwa kwemamwe masevhisi ebato rechitatu.
Chii chekutsvaga kana uchisarudza peji peji?
Paunenge uchienda kunosarudza chimiro peji system, zvakakosha kuti utarise mutsara we maitiro ekuita sarudzo yakanaka. Zvimwe zvezvinonyanya kukosha ndezvi:
Inofanirwa kupa yakakwana uye yakajeka sevhisi ruzivo ruzivo.
Otomatiki yekutarisa kugona, pamwe nekuronga kwemanyorerwo uye kugadzirisa kana zvichidikanwa.
Ratidza uptime metrics.
Notification system kana zviziviso zvevanyoresa.
Wepamusoro gumi nemaviri
Kana iwe uchida kugadzira peji idzva rechimiro chepurojekiti yako kana kambani, uye iwe uchida kuti ive yakavhurika sosi uye yemahara kushandisa, hezvino unoenda. iyo 3 inokurudzirwa zvakanyanya:
Cachet: a status page system yakagadziridzwa naJames Brooks uye pasi peBSD rezinesi uye inokwanisa kunyora masevhisi ako, kuzivisa zviitiko, inogoneka, yakapusa uye ine simba, ine JSON API, metrics mudhibhodhi rayo kuona mamiriro ese, anowanikwa mukati mitauro yakati wandei, zviziviso zvevanyoreri neemail, inotsigira nhanho mbiri, uye inogona kushanda paPC uye nharembozha.
uptime: Yakagadzirwa naAnand Chowdhary uye ine rezinesi pasi peMIT. Iri rimwe peji remamiriro ehurongwa rinokutendera kuti utarise nguva yepamhepo yega maminetsi mashanu, kutarisa isina muganho mapeji ewebhu, rekodha paramita uye kugadzira magirafu, chiitiko chekuzivisa sisitimu, kugona kutaura kuburikidza neTeregiramu kana Slack, uye nechitarisiko chazvino uye kunzwa.
statting-ng: yakagadziridzwa neStatping NG uye pasi peGNU GPLv3 rezinesi, iyi imwe sisitimu ine inotaridzika kumberi kwaunogamuchira zviziviso nguva dzese masevhisi ari kunze kwenyika, inobvumidza iwe kugadzirisa masitaera, senge color scheme, unogona kurongedza masevhisi mumapoka, interface. iri nyore girafu, kugona kuzivisa kuburikidza neTeregiramu, Slack, Discord, email, nezvimwewo, uye neRESTful API yekutarisa masevhisi akadai seHTTP, TCP, UDP, uye gRPC protocol.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Status Peji Sistimu: chii icho, uye chii chiri nani
Ini ndaisavaziva. Ini ndinowanzo kushandisa Grafana kune izvi nezvimwe zvinangwa. Ndatenda.
Iwe unogona ikozvino kushandisa LibreOffice kubva kubrowser yako nekuda kweWebAssembly
KaOS 2022.02 yakatoburitswa, ziva chii chitsva